Jerusarema rakaita semudziyo wekubikira une ngura (1-14)
Kufa kwemudzimai waEzekieri chiratidzo kuvanhu (15-27)
24 Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri mugore rechi9, mumwedzi wechi10, pazuva rechi10 remwedzi wacho, richiti: 2 “Mwanakomana wemunhu, nyora pasi zuva iri, iro zuva ranhasi. Mambo weBhabhironi atanga kurwisa Jerusarema nhasi.+ 3 Taura chirevo pamusoro peimba inopanduka, uti nezvavo: “‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Gadzai mudziyo wekubikira; ugadzei pamoto, mudire mvura mauri.+ 4 Isai nhindi dzenyama imomo,+ nhindi dzese dzakanaka,Chidya nebandauko; uzadzei nemapfupa akanaka kwazvo. 5 Torai gwai rakanakisisa,+ uye rongai matanda pasi pemudziyo wacho muchiutenderedza. Bikai nhindi dzacho nemapfupa acho imomo.”’ 6 “Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Rine nhamo guta rekudeura ropa,+ iwo mudziyo une ngura, mudziyo usina kubviswa ngura! Budisai nhindi dzirimo;+ budisai imwe neimwe musingaiti zvekukanda mijenya. 7 Nekuti guta racho richiri neropa rarakadeura;+ rakaridururira paruware. Harina kuridururira pasi kuti ririfushire nevhu.+ 8 Ndaisa ropa raro paruware runopenyaParisingafushirwe,Kuti ndimutse hasha dzekuda kutsiva.’+ 9 “Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Rine nhamo guta rekudeura ropa!+ Ndichaunganidza bakwa rehuni richienda mudenga. 10 Unganidzai matanda uye batidzai moto,Bikai nyama yacho kusvika yaibva, bvisai muto wacho, musiye mapfupa acho achitsva kuita tsito. 11 Isai mudziyo wacho pamazimbe kuti upise,Kuti mhangura yawo itsvuke nemoto. Tsvina iri mauri ichanyunguduka,+ uye ngura yawo ichatsva. 12 Izvi zvinogumbura uye zvinonetesa,Nekuti ngura yawo zhinji haisi kubva.+ Ukandei mumoto nengura yawo!’ 13 “‘Mabasa ako akafumuka ndiwo akakusvibisa.+ Ndakaedza kukuchenesa, asi hauna kuchena. Hauzocheni kusvikira kukutsamwira kwandakaita kwapera.+ 14 Ini Jehovha, ndazvitaura. Zvichaitika. Handizoregi kuzviita. Ndichazviita ndisingambonetseki kana kuzvidemba.+ Vachakutonga zvinoenderana nenzira dzako nezviito zvako,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.” 15 Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 16 “Mwanakomana wemunhu, ndava kuda kukubvutira mudiwa wako.+ Haufaniri kuchema kana kuridza mhere kana kubudisa misodzi. 17 Gomera wakanyarara, uye usaita zvinoitwa pakuchema mufi.+ Pfeka ngowani* yako+ neshangu dzako.+ Usavhara ndebvu dzepamusoro pemuromo+ uye usadya zvekudya zvaunounzirwa nevanhu.”+ 18 Ndakataura nevanhu mangwanani, uye mudzimai wangu akafa manheru. Saka mangwanani ndakaita zvandakanga ndaudzwa. 19 Vanhu vaiti kwandiri: “Haungatiudziwo here kuti zvinhu izvi zvauri kuita zvinorevei kwatiri?” 20 Ndakati kwavari: “Shoko raJehovha rauya kwandiri richiti, 21 ‘Udza imba yaIsraeri kuti: “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Ndava kuda kusvibisa nzvimbo yangu tsvene,+ icho chidadiso chenyu, chinhu chamunoda chaizvo uye chiri pamwoyo penyu. Vanakomana nevanasikana venyu vamakasiya vachafa nebakatwa.+ 22 Muchabva maita sezvandaita chaizvo. Hamuzovhari ndebvu dzepamusoro pemiromo yenyu, uye hamuzodyi zvekudya zvamunounzirwa nevanhu.+ 23 Muchange makapfeka ngowani dzenyu uye makapfeka shangu. Hamuzochemi kana kuridza mhere. Asi muchaorera muzvivi zvenyu,+ uye muchatarisana muchigomera. 24 Ezekieri ava chiratidzo kwamuri.+ Zvaaita ndizvo zvamuchaita. Pazvichaitika, muchaziva kuti ndini Changamire Ishe Jehovha.’”’” 25 “Asi iwe mwanakomana wemunhu, pazuva randichavatorera nhare yavo yakanaka inovafadza, yavanoda chaizvo, uye iri pamwoyo pavo, pamwe chete nevanakomana vavo nevanasikana vavo,+ 26 uchaudzwa nezvazvo nemunhu anenge apukunyuka.+ 27 Zuva iroro uchashama muromo wako wotaura neachapukunyuka, hauzorambi wakanyarara.+ Uchava chiratidzo kwavari, uye vachaziva kuti ndini Jehovha.”